> Resource > iPhone > Sidee Macdan iPhone Xiriirada in CSV on PC / Mac
Waxaan soo saaro karaa iPhone xiriirada si file CSV ku computer?
Waxaan jeclaan lahaa inaan soo saaro xiriirada aan ka iPhone sida file CSV ah. Waa in file hal CSV oo dhan xiriirada, ma xiriir gaar ah oo ku saabsan file kasta. Macquul ma tahay wax? Fadlan ha i garan. Thanks ka hor.
Haa, waa posibile. Waxaa jira laba siyaabood oo aad u soo saaro xiriirada iPhone si aad u file CSV ah. Mid ka mid ah waa in ay Macdan aad gurmad Lugood, kan kalena waa in ay si toos ah u soo saaro xiriirada ku saabsan iPhone. Si kasta oo aad doorato, inaad si fiican u lahaa qalab xiriirada iPhone shawladda ah lagu rakibay on your computer at hore.
Ma aha in mid ka mid ah? Halkan waxaad ka heli karaa talo, Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Windows) , ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) , 100% ammaan iyo xirfadeed. Labada versions of software awood aad Macdan xiriir midkood iPhone midna gurmad Lugood. Iyadoo qasabno yar, waxaad ka heli kartaa liiska xiriirada ah qaab CSV aad PC ama Mac.
Next, aynu isku dayaan in ay soo saaro iPhone xiriirada si CSV ah fayl la Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows). Haddii aad tahay qof user Mac ah, waxaad isticmaali kartaa Wondershare Dr.Fone (Mac) oo ay qaadaan talaabooyin la mid ah sida soo socota.
Qeybta 2: Waraaqda iPhone xiriirada si CSV kaga imaanayo Lugood
Si aan ku bilaabo, ayaa bilaabaysa barnaamijka iyo xiriiriyaan iPhone in kombuyuutarka, marka aad doorato in aad soo saaro xiriir toos ah ka iPhone in CSV.
Step1. Connect iyo baarista iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS
Ka hor inta baar xiriirada ku saabsan iPhone, waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan aad iPhone in kombiyuutarka.
Haddii aad isticmaasho iPhone 5 / 4s, suuqa kala barnaamijka ku tusi doonaa sida soo socota ka dib markii aad iPhone ku xidhi: Riix Start Scan si ay baarista iPhone 5 / 4s.
Haddii aad isticmaasho iPhone 4 / 3GS, waxaad u baahan tahay in ay galaan hab iskaanka ka iPhone ee soo socda hage hoose si aad u iskaan:
3. Fur button Power iyo sii riixaya badhanka Home for kale 15 ilbiriqsi.
Markii barnaamijka uu baaritaanku aad iPhone, aad arki doonaa suuqa kala hoose.
Step2. Waraaqda iPhone xiriirada si file CSV
Marka scan ku tartama, dhammaan xogta ku saabsan iPhone la marsiiyey doonaa oo ku qoran warbixinta natiijada hoos ku qoran. Waxaad ku eegaan karo oo dhan iyaga ka mid ah oo ay ka mid. Wixii aad xiriirka la leedahay, waxaad la Calaameeyey karo oo guji Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer. Hadda, aad soo bixiyay xiriirada iPhone sida file CSV ah.
Step1. Dooro gurmad Lugood in uu soo saaro
Haddii aad doorato sidan, waxaad lahaa fiican ayaa synced aad iPhone la Lugood hor. Ka dib markii socda barnaamijka, beddelaan hab-kabashada inuu ka soo kabsado Lugood ee kaabta File dusheeda ah, oo waxaad heli doontaa suuqa kala hoose. Dhammaan Lugood aad files gurmad si toos ah la marsiiyey doonaa oo soo bandhigay. Dooro mid ka mid ah oo guji Start Scan in ay sii wadaan.
Step2. Waraaqda iPhone gurmad xiriirada si CSV
Scan ka dib, xogta aad ee faylka gurmad oo dhan waa la soo saaro doonaa oo ku qoran qaybaha. Riix Xiriirada bidixda, si aad ku eegaan kartaa xiriirada content oo dhan. Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto oo guji Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer sida file CSV ah.